PAFD: Weerarri Liyuu Poolisii Hariiroo Obbolummaa Saboota Kuush Hin Daddaaqsu - Adda Bilisummaa Oromoo | Adda Bilisummaa Oromoo
Home » Oduu » Oduu Gara Garaa » PAFD: Weerarri Liyuu Poolisii Hariiroo Obbolummaa Saboota Kuush Hin Daddaaqsu
By admin on March 11, 2017.
Duulli Sirni TPLF/EPRDF Humnoota Liyyuu Poolisii Somaalee fi Waraana Isaatin Ummata Oromoo Irratti Bane, Hariiroo Obbolummaa Saboota Kuush Lameenii Jaarraadhaaf Ture Hin Daddaaqsu.
Ibsa KHR- Tumsa Ummattootaa Bilisummaa fi Dimokraasii(TUBD)
Addi Bilisummaa Ummata Tigraay(TPLF) bara 1991 erga aangootti dhufee kaasee mirga ummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa keessaa baroota dheeraaf sarbameef kan falmuu fi kabajsiisu fakkeessee of dhiyeessaa bahe. Kanas dhugaa fakkeeffatuun daba golgaa dimokraasiin raawwatu golgafuuf, akkasumas, Ummattoota biyyattii fi hawaasa addunyaa afanfaajjessuuf miidiyaa biyyattii guutummaatti tohannoo fi ajaja isaa jala jirutti fayyadamee olola afanfaajjessaa fi dharaa halkanii-guyyaa afarsa.
Sirni Wayyaanee/TPLF sagantaa qindaa’aa ummattoota biyyattii kabajaa namoomaa dhorkatuun salphisuu fi cunqursaa akkaan hamaaf saaxilu qabaachudhaan mootummaa isaan dura turerraa caalee argama. Murni TPLF akeeka isaa abaaramaa kana galiin gahatuudhaafis eenyummaa isaa kan dhugaa haguuguun dhaabolee maxxannee maqaa sabootaa fi sab-lammiileetin ijaare (PDOlee) jedhaman ijaarrate. Sababoota ijoo PDOlee kanneen ijaaruu keessaa tokko warreen sammuu namummaa hin qabne, akka meeshaatti dhimma itti bahuuf filate kanneen of dura qabee ummatoota keessa seenuun akka barbaadetti dhimmoota ummattootaa keessa seenuu fi qabeenya sabootaa fi ummattoota Itoophiyaa saammatuudhaafi.
Waan taheef, abjuun guddaa fi galiin akeekaa sirna TPLF ‘Tirgaay Guddittii’ ijaaruu dha. Abjuun kun ammallee bakkuma isaa kan jiru tahuu humna waraanaa, diinagdee fi tikaa jabeeffataa jiraachuu isaarraa hubachuun ni dandahama. Akeeka kanarratti hundaahudhaanis, TPLF naannoo Tigraayitti dhaabbilee barnootaa, faaynaansii fi daldalaa akkasumas ijaarsaalee barbaachisoo sadarkaa biyya walaboomteetti ijaaree jira.
TPLF kaayyoon isaa ka dhugaa qabeenyaa fi leeccalloo ummattoota Itoophiyaa % 94 tahanii saammatudhaan “Tigraay walabaa fi hundaa olitti jabduu” taate ijaaruu tahuun wayta ammaa caalaatti ifa bahaa dhufeera.
Saamichaa fi manca’iinsi qabeenyaa biyyattii irratti gaggeeffamu akkasii kun, erga sirnichi bara 1991 aangootti bahee kaasee odoo adda hin citin raawwatamaa har’a gahe. Baroota 25, dabraniif murni aangoorra jiru naannoo dhaloota isaa, qondaalota sirnichaa fi jeneraalota isaa duroomsaa fi qananiisaa, faallaa kanaatin ammoo ummattootaa fi saboota biyyattii tohannaa isaa jala galchuudhaan dhimmoota isaaniirratti mirga-dhablee taasise. Jiruun ummattoota biyyattiis ittuu akkaan hammaataa deeme.
Ummattoonni biyyattii eenyummaadhuma isaanii, ilaalcha siyaasaa fi amantii hordofaniif sirnichaan dararaa hamaaf affeeraman. Haala kanaan ummanni Oromoo adda durummaan akka diinaatti kan irratti xiyyeeffatame yoo tahu, Somaalii Ogaadeen, Amaara, Gaambeellaa, Benishaangul, Koonsoo, Sidaamaa fi kanneen hafanis itti aanuun kanneen irratti xiyyeeffatame dha.
Mootummaan TLFP/EPRDF erga aangootti bahee qabee, aangoo biyyattii guutummaatti dhuunfatuun qabeenya hagana hin jedhamne ummatoota biyyattii saamuu dhaan horateera. Karoora adda qoqqoodanii bituu raggaafateenis sabootaa fi ummattoota biyyattii walitti buusuun aangoo isaa turfatuu fi saaminsa daangaan alaa gaggeessaa jiru itti fufuuf itti gargaarame.
Ummattootni cunqurfamoon lola sirnichi beekaa uumeen wayta wal dura dhaabbatanitti abbootiin shiraa kanneen garuu qabeenya biyyaa guutummaatti saammatuun dantaa isaanii irra oolfataa jiran. Doorsisuu fi shororkeessuun qorqalbii ummattoota cunqurfamoo cabsanii gad aantummaan akka itti bulu taasisuun umrii bittaa fi saaminsaa dheereffatuunis akeeka mootummaa cunqursaa kanaa ti.
Kana malees, heera ofiif tume dalagaa farrummaa balaaleffatu cabsee adeemsa hammeenyaa itti jiru itti fufuunis eenyummaa isaa ifatti mul’ise. Dalagaa isaa kanaanis sirnichi fedhii fi hawwii ummattootaa fi saboota biyyattii hundaa wal qixa ilaaluu fi bakka bu’uu akka hin dandeenye mirkaneesse. Sirni hanna, waliin dhahiinsaa fi kijibaan qarame, akkasumas, roorroo ummattoota nan bulcha jedhurratti raawwatuun beekamu, aangoorra turuudhaaf gahaa tahuu hin danda’u; Hamilees itti hin qabu.
Lafa Jeneraalota TPLF fi invastaroota idil addunyaa dantaa murna kanaa tiksaaniif kennuuf jecha, Ummattootni naannolee, Godinaalee fi Onoota adda addaa dachee isaaniirraa buqqifamanii dirreerratti facaafamuun hiyyummaaf saaxilamanii jiran.
Bara bittaa Wayyaanee/TPLF waggoota 25n lakkoobsise keessatti mootummaan kun dalagaan hammeenyaa raawwatu akka hin hubatamneef gara dabarsuuf jecha irra deddeebi’ee bakkoota hedduutti ummattoota walitti buusaa ture; ittis jira. Wayta barbaadetti ummattoota obbolaa fi ollaa gaarii waliif tahuudhaan jaarraa dheeraaf nagaan waliin jiraatan jidduutti summii waljibbiinsaa fi walitti bu’iinsaa facaasa. Waldhabbii ofumaa uumeef araarsituu fi nagaa buustuu fakkeessee of dhiyeessuunis amala sirnichaa ti. Wayta ummattoonni mirgoota heeraan ragga’eef gaafatan akkuma wayta ammaa Oromiyaa fi naannolee biyyattii biroo keessatti mul’ataa jiru, lammiilee siviilii kumootaan ajjeesa, kuma kudhanootaa hidhaatti guura.
Wayta ammaa kana sirni TPLF “Labsii Yeroo Hatattamaa” Onkoloolessa bara 2016 labseen lammiilee sadarkaa tilmaamuun rakkisaa taheen shororkeessaa jira. Warraaqsa ummata Oromoo Muddee 2015 eegalee fi kan naannoo Amaaraa Hagayya 2016 eegale dhaamsuuf jecha murni aangoorra jiru kun, dhiiga ummata Oromoo, Somaalii Ogaadeen, Amaara, Sidaamaa, Koonsoo, Benishaangul, Gaambeellaa fi naannolee biroo dhangalaasaa jira. Ammaan tana ummanni Oromoo humnoota TPLF’n hidhachiifamanii fi bobbaafaman “Liyyuu Poolisii Somaalii fi waraana Ag’aazitiin” guyyuu qaqqalamaa jira. Ergamtoonni TPLF liyyuu Poolisii naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa Godinaa Booranaatii hanga Hararge gahutti ajjeechaa jumlaa ummata Oromoorratti raawwataa jiran.
Akeekni lola wayta ammaa Wayyaaneen qabsiifamee deemaa jiru kanaa warraaqsa ummata Oromoo dhaamsudhaaf jecha. Shira ummattotaa gidduutti waldhabbii uumuu fi walii ficcisiisudhaan kanaanis Wayyaanee/TPLF hawwii ummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo biyyattii keessa jiranii dukkaneessuuf abjoota. Haa tahu malee, ummanni Oromoo shiraa fi duula akkasiitin falmaa bilisummaa fi mirga hiree murteeffannaaf ummattoota gaaffii fakkaataa qaban akka Ogaadenii fi kanneen biroo waliin gaggeessaa jiru galiin gahu malee gonkumaa akka of booda hin deebine murannoo agarsiisaa jiruun mirkaneessaa jira.
Tumsi Ummattootaa Bilisummaa fi Dimokraasii ummanni Oromoo akkasumas sabootni Ogaadeeniyaa, Koonsoo, Gambeellaa, Sidaamaa, Affaar, Benishaangugumuz, Amaaraa fi ummattoonni cunqurfamoon biyyattii biroonis sirna namanyaataa TPLF jalaa bilisa of baasuuf yeroo kamiyyuu caalaa murannoon sossohaa jiru jedhee amana. Kana malees, gaaffiin ummataa afaan qawwee fi labsii yeroo hatattamaatin lammiilee biyyattii shororkeessuun ukkaamfamuu danda’a jedhee hin amanu.
Ji’oota 16n dabran keessa qofa, sirni TPLF/EPRDF Oromiyaa keessatti mirgoota heeraan qaban gaafachuu isaanitiif lammiilee Oromoo fayyaaleyyii 1,500 hanga 1,700 gahan ajjeeseera; kanneen 150,000 hanga 160,000 tahan ammoo seeraa ala hidheera. Akkasuma ummanni Amaaraatis kan itti xiyyeeffatame yoo tahu, Ogaadeen, Koonsoo, Gaambeellaa, Benishaangul, Sidaamaa fi bakkoota biroottis yakki fakkaataan lammiilee irratti raawwatameera. Sirna kana jalatti daa’immani fi manguddoonni, dhiiraa-dubartiin odoo adda hin baafamin duulli ajjeechaa jumlaa Mootummaa shororkeessaan irratti gaggeeffamuu irratti argama.
Duulli liyyuu Poolisii naannoo Somaalee, Jeneraalota sirna TPLFn leenjifaman, hidhachiifamanii fi qajeelfamaniin wayta ammaa kana ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru, akkaan suukaneessaa balaaleffatamuu qabu, fudhatama hin qabne dha. Tumsi Ummattootaa Bilisummaa fi Dimokraasii(PAFD) sirni TPLF yakka hammeenyaa waliigala ummattoota biyyattii irratti addatti ammoo ummata Oromoorratti raawwataa jiru hatattamaan akka dhaabu fi aangoo gadi lakkisu gaafata.
Ummatni Oromoo fi ummanni Somaalii Ogaadeen summii qoqqoodanii bituu fi shira walitti bu’iinsaa murni TPLF jidduu isaaniitti xaxu sirriitti hubatu. Waan taheef, ummattoonni obbolaa tahan lameen karoora abaaramaa fi hammeenyaa TPLF qopheessee hojiirra oolchaa jiru waloon fashalsuuf sossohuu qabu. Ummattoonni obbolaa tahan lameen akkasumas sabootni cunqurfamoo biyyattii hafanis yoomiyyuu caalaa harka walqabatanii sirnicha ofirraa kaasuuf qabsaa’uu fi mootummaan TPLF “qoqqoodee isaan bituu” akka hin dandeenye dalagaadhaan agarsiisuu qabu. Ummanni Oromoo fi Somaalii Ogaadeen sirna lameen isaanii kabajaa dhorkate, eenyummaa isaanii haalee fi mirga isaanii sarbee jiru irratti fuulleffatuu qaban.
TUBDn liyyuu poolisiin naannoo Somaalii fi OPDOnni mootummaa TPLF aangoorra of tursuuf jecha shira walitti bu’iinsaa ummattoota obbolaa jidduutti uume kana guutummaatti dura dhaabbatuun akka fudhatama dhabsiisan gaafata. Tumsichi kana malees sabootni cunqurfamooni fi waliigala ummattoonni Itoophiyaa keessaa tokkummaan dhaabbachuun dalagaa faashistummaa raawwataa jiruu fi impaayera ofii ijaarrachuudhaaf saamicha qabeenya biyyattii irratti gaggeessaa jiru akka balaaleffatan gaafata. Kana malees, TUBDn ummattoonni biyyattii keessa jiran marti irree gamtaahen sirna aangoorra jiru qaarisuuf adda tokkummaa, bilisummaa, dimokraasii fi of bulchiinsa dhugaa mirkaneessu dhugoomsuu irratti qooda irraa eegamu akka gumaachan waamicha dhiyeessa.
Maayiirrattis, hawaasni addunyaa, addatti, Jaarmayootni idil addunyaa kanneen akka Tokkummaa Mootummootaa fi hogganoonni siyaasaa Dhihaa, dhumaatii jumlaa fi cunqursaa ummattoota biyyattiirra gahaa jiru utubuurraa daddaffiin akka dhaabbatan gaafata.
Haqaa fi Bilisummaa Ummattoota Cunqurfamoo Itoophiyaaf!
KHR- Tumsa Ummattootaa Bilisummaa fi Dimokraasii (TUBD)
Bitootessa 8 bara 2017